Garssoore kubada cagta ee Talyaaniga ayaa loogu dilay gurigiisa qaab naxdin leh magaalada Lecce… – Hagaag.com
Garsoorihii kubada cagta ee Talyaaniga Daniele De Santis iyo lamaanihiisii ​​modelka xayeysiisa, Eleonora Manta, ayaa loo diley qaab naxdin leh iyaga oo toorey lagu diley guri uu ka deganaa magaalada Lecce.
Shilkan ayaa dhacay Isniintii lasoo dhaafay wuxuuna naxdin ku abuuray guud ahaan Talyaaniga, gaar ahaan isboortiga iyo kubada cagta, garsoorayaasha ciyaartuna waxay u istaageen iyaga iyo kooxaha muddo daqiiqad ah oo baroor diiq ah geerida saaxiibkood.
Warbixinnada saxaafadda ee Talyaanigu waxay caddeeyeen in aqoonsiga dambiilaha iyo ujeeddadiisa aan weli caddayn, laakiin markhaatiyada qaarkood waxay maqleen Manta oo ku qaylinaysa magaca gacan-ku-dhiiglaha, sida muuqata, iyada oo la arkayay isagoo wadada ku ordaya oo mindida wata, taas oo u horseedi karta booliska aqoonsiga gacan-ku-dhiiglaha.
Xiriirka Talyaanigu wuxuu soo saaray bayaan rasmi ah oo uu ku sifeynayo De Santis oo 33 jir ahaa inuu ahaa “nin geesi ah oo isla weyni ku jirin, iyo garsoore rajo leh.”
De Santis ayaa loo qorsheeyay in uu maamulo kulanka Coppa Italia ee Khamiista maanta dhex mari doona kooxaha Monopoli iyo Modena.